Ukuvikelwa kwe-Offshore ye-Asset kanye nobumfihlo bezezimali - Kanjani futhi kuphi
I-Offshore Company.com isizile ukuvikela izigidi zamaRandi ngezinkulungwane zamakhasimende ezinokuphepha kwe-ironclad. Singakusiza nawe.
Izizathu Zokuvikela Impahla Yakho
Ukumangalelwa kwebhizinisi / ozakwethu
Ababolekisi abangenamthetho / abangemthetho
Vikela Ikhaya Lakho, Ukulondoloza Nezimali
Sinikeza izinsizakalo eziningi zokuvikela izimpahla ezivela ezilula futhi ezivikelekile kuya eziyinkimbinkimbi kanye ne-bulletproof. Ukubonisana kwe-MAHH ngayinye kuyoholela ekutholeni ikhambi langokwezifiso elifanele izimpahla zakho nezingozi zakho siqu. Ayikho into encane kakhulu yokuvikela.
Izinkambiso eziphezulu ze-3 Zokuvikela Amafa
Dala i-Offshore Trust
Setha i-akhawunti yasebhange yomhlaba jikelele nge-100% ubumfihlo
Qala inkampani ye-offshore noma inkampani enomkhawulo wemfanelo ukuze uvikeleke kakhulu
Sithembisa ukusebenza nawe futhi sithole isixazululo esingcono kakhulu sokuvikela izimpahla zakho ekuthunjweni okungadingeki. Shayela noma ugcwalise ifomu lokuxhumana kuleli khasi.
I-Offshore Company Formation kanye Nokuvikelwa Kwempahla
Ukubeka izimpahla ezinkampanini zasemaphandleni nezakhiwo zomthetho kunganikeza ungqimba oqinile wokuvikelwa ezikweleta ezizayo. Abanye abantu abacebile kakhulu futhi abavikelekile ngokomthetho emhlabeni bazosho into eyodwa "Ungabi nalutho, lawula konke." Ngokusebenzisa ama-akhawunti asebhange namanye amafa angaphansi kwenkampani yakho kubenza kube nzima ukuthola usesho lwefa lomsebenzi.
Inkampani ye-Offshore Incorporation nokuvikelwa kwezomthetho
Uma umphikisi wezomthetho elandela i-suit, lokhu ngokuvamile kuhilela ukusesha kwefa ukuze kuqinisekiswe ukuthi kuyoba nokubuyisela uma isahlulelo sizokhishwa. Ukuba nempahla egameni lomuntu kungatholakala ngokushesha ngokuseshwa kwamarekhodi elula. Ukwakha izinkampani zasolwandle futhi ubiza izimpahla enkampanini, kusho ukuthi asisekho egameni lakho. Ngakho-ke izimpahla zakho zingavikelwa eziphikisana nezomthetho, amajaji kanye nezinqumo zenkantolo ngokufaka nje kuphela emaphandleni.
Enye inzuzo ongayisebenzisa ngayo kulula. Amandla amaningi ase-offshore enza kube lula kunoma ubani onentshisekelo yokufaka. I-Offshore Company.com ingumholi wezwe emkhakheni wezamabhizinisi asezintshonalanga. Sizosiza isu lakho futhi sithuthukise uhlelo lokuvikela izimpahla ngezidingo zakho.